Siyaasiga Bashiir Danan oo xusulduub ugu jira doorashada madaxtinimada ee Gobolada Dhexe (Daawo Sawirada) | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Siyaasiga Bashiir Danan oo xusulduub ugu jira doorashada madaxtinimada ee Gobolada Dhexe...
Siyaasiga Bashiir Danan oo xusulduub ugu jira doorashada madaxtinimada ee Gobolada Dhexe (Daawo Sawirada)
Kulan ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen, Xidhibaano, Siyaasiyiin, Aqoonyahano, Nabadoono, Haween, Bulshada Rayidka iyo dad matalayay dhamaan beelaha daga Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta waxa uu ka dhacay Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Kulanka ayaa u jeedkiisu waxa uu ahaa in Dr. Bashiir Aadan Cali Danan oo ah musharax u taagan qabashada xilka Madaxweynanimo ee maamulka gobolada dhexe uu ku wargaliyo beelaha goboladaasi daga in uu yahay musharax u taagan xilkaasi, isla markaana ay ku taageeraan sidii uu xilkaasi u hanan lahaa.
Dr. Bashiir Aadan Cali Danan oo ah Aqoonyahan muddo dheer ka soo shaqeynayay wasaarada Arrimaha dibadda, oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in dadka ku nool Mudug iyo Galgaduud uu u noqdo adeege si xalaal ah ugu shaqeeya.
“Aniga ma noqonayo sida Madaxeynayaasha guryaha isku soo xiraya ee waxaan noqon doonaa Adeege, dadka u shaqeeya oo dhinac taagan mar kasta”. Dr. Bashiir ayaa sidaasi sheegay.
Mar uu musharax Dr. Bashiir si kooban u sharxay siyaasadiisa ku aadan waxa uu qaban doono hadii uu ku guuleysto xilka Madaxweynanimo ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in uu labo arrimood xooga saari doono, kuwaasi oo kala ah: in dadku ay la xisaabtami karaan Dowladda iyo dib u heshiisiinta beelaha daga goboladaasi.
Xildhibaan hore Xasan Kaynaan Xalane oo kamid ahaa dadkii ka qeybgalay kulankan ayaa waxa uu sheegay in Musharax, Dr. Bashiir Aadan uu yahay shaqsi wanaagsan, kaasi oo xiriir fiican la leh dowladaha dariska la ah Soomaaliya, waxaana uu carabka ku adkeeyay in ay raali ka yihiin musharaxnimadiisa ayna taageeri doonaan.
Muxyadiin Xasan Afrax oo ka tirsan bulshada Rayidka, kana soo jeeda gobalada dhexe ee Soomaaliya ayaa isna dhankiisa sheegay in uu ku qancay musharaxan dhalin yarada ah, isla maarkaana ay raali ka yihiin in uu noqdo Madaxwenaha gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Sahro Cumar Maalin oo kamid aheyd haweynkii ka qeybgalay kulankan ayaa waxa ay cod dheer ku sheegtay in ay taageerayaan Bashiir Aadn oo ka badalan siyaasiyiintii hore, madaama uu yahay aqoonyahay waxbadan ka yaqaan dadka, kaasi oo aan ka qeybqaadan dagaaladii dalka ka dhacay, isla markaana uu u qalmo in uu hogaamiyo bulshada gobolada dhexe.
Ugu Danbeyntii, Maxamed Xasan Xaad, Guddoomiyaha Beelaha Hawiye oo dhamaadkii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu muujiyay kalsoonida ay beelaha daga gobolada dhexe ku qabaan Mudane Bashiir Aadn Cali Danan, waxaana uu hoosta ka xariiqay in uu mudnaanta koowaad ka leeyahay musharaxiinta kale.
Dr. Bashiir Aadn Cali Danan oo ah Aqoonyahan da’yar, isla markaana muddo dhawr iyo toban sano ah ka soo shaqeynayay Wasaarada Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo safaaradaha qaar kamid wadamada dariska ah ayaa hada diyaar u ah in uu hogaamiyo bulshada Soomaaliyeed ee daga gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Dhamaan dadkii ka soo qeybgalay kulankan oo ka badnaa 500 ruux ayaa u muujiyay in ay ku qanacsan yihiin qorsha hogaamineyn, waana musharaxii ugu horeeyay ee isu soo taagay xilka Madaxweynaha Maamulka gobolada dhexe.